ဆရာမငျးသုခ၏ 2021 ခုနှဈ (1) လပိုငျးအတှကျ တဈလစာဟောစာတမျး
HomeKnowledgeဆရာမငျးသုခ၏ 2021 ခုနှဈ (1) လပိုငျးအတှကျ တဈလစာဟောစာတမျး
H January 14, 2021
2021 ခုနှဈ (1) လပိုငျးအတှကျ တဈလစာ ဟောစာတမျး
1.1.2021 မှ 31.1.2021 ထိ မိတျဆှမြေားအားလုံးအတှကျ
ဟောစတမျးအပွငျ ယတွာလေးတှပေါလို့ သိမျးထားဖို့မမနေဲ့နျော..
သငျ၏မိတျဆှသေူငယျခငျြး ဖတျရှု့နိုငျအောငျ Like and Share ပေးကွပါ.
2021 နှဈသဈအတှကျ မိမိကံကွမ်မာအဆိုးအကောငျးကို ဆရာမငျးသုခထံ ဖုနျးဖွငျ့ တိုကျရိုကျဆကျသှယျမေးမွနျးနိုငျသညျ။
ခုနှဈရကျသားသမီးမြား အားလုံး စိတျခမျြးသာကိုယျကနျြးမာပွီး လိုအငျဆန်ဒ တဈလုံးတဈဝပွညျ့စုံကွပါစေ.. ကံဇာတာအညံ့မြားလညျး ပပွောကျပွီး ကံပှငျ့ စနျးပှငျ့ မတ်ေတာရေး အခဈြရေးမြား အဆငျပွကွေပါစေ..
1.1.2021 မှ 31.12021 ထိ တဈလစာဟောစာတမျး
တနင်ျဂနှသေားသမီးတှအေနနေဲ့ ဒီလအတှငျး သူမြားကိစ်စကွားဝငျ ကူညီခွငျး၊အာမခံခွငျး တှကွေောငျ့အထူးဒုက်ခရောကျ တတျပါတယျ။ လငျမယားကွား မိတျဆှတှေကွေား ဘယျသူ့ကွားမှ မဝငျမိပါစနေဲ့။ ဘယျစီးပှားရေးနယျပယျမှာဖွဈဖွဈ အခုကာလမှာ ရတာကနညျးနညျး ၊ပွဿနာရှငျးရတာက မြားမြားဖွဈနလေိမျ့မယျ။ ရှငှေလေကျဝတျရတနာမြား ကပြောကျခွငျး သူခိုးခိုခံရခွငျးတှေ ကွုံနိုငျတယျ။
လူငယျတှအေနနေဲ့ စီးပှားတှကျ တှကျနတေဲ့ခဈြသူကွောငျ့စိတျညဈရမယျ။ ခဈြသူကိုအခြိနျပေးဖို့ထကျ ငှနေောကျပဲလိုကျနပေါလိမျ့မယျ။အလုပျမှာ ရနျပျေါနိုငျတဲ့ကာလပါ။ အလုပျရှာနသေူမြား အလုပျရဖို့ဝေးနပေါလိမျ့မယျ။ အရမျးရငျးနှီးသူတှနေဲ့ ခှဲခှာရတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေး သိပျမညံ့ပမေဲ့ ပညာရေးကံကွမ်မာကတော့ အညံ့ဆုံးအနအေထားကို ရောကျနတေဲ့ ကာလပါပဲ။ နောကျဆုံးပွောခငျြတာက ဘယျသူကိုမှ မယုံသငျ့ဘူးလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
အထူးဟော = ကံညံ့နသေညျ။
ယတွာ = သင်ျဘောသီးဖြျောရညျတဈခှကျ မှေးနနေံ့နကျမှာ ဘုရားကပျလှူလိုကျပါ။
1.1.2021မှ 31.12021ထိ တဈလစာဟောစာတမျး
ဆုံးဖွတျရ ခကျနလေိမျ့မယျ။ အရာရာသတိထား ဆောငျရှကျပါ။ ရှတေို့းဆောငျရှကျမဲ့ကိစ်စမြား မိမိဆုံးဖွတျခကျြတဈခုတညျးနဲ့ မဆုံးဖွတျပါနဲ့။ အလုပျနဲ့ပကျသကျပွီး စိတျရှုပျနရေပါတယျ။ မသှားခငျြတဲ့နရော သှားရခွငျး၊ နယျပွောငျးခံရခွငျးတှေ ကွုံတှရေ့ပါလိမျ့မယျ။အထကျလူကွီးက မိမိအပျေါ အမွငျမကွညျတာမြိုးတှလေဲ ရှိနပေါတယျ။ စိတျအရမျးညဈရတတျတယျ။ အိမျထောငျဘကျ အခငျြးခငျြးစကားအခွအေတငျ မြားရတတျတယျ။ မိသားစုနဲ့ ခှဲခှာရတတျပါတယျ။ မိတျဆှကေောငျးတှရေဲ့ ကူညီမှုအမြားကွီးရမဲ့ အခြိနျပါပဲ။ ကနျြးမာရေးလဲ အနညျးငယျ အားနညျးနပေါတယျ။ နပေူနညျးနညျးမိတာမြိုး၊ အိပျရေးပကျြတာမြိုးကွုံတာနဲ့ ဖြားနာတတျပါတယျ။ စိတျပွလေကျပြောကျ ခရီးထှကျခွငျး၊ ကလေးတှကေို ပြျောအောငျလုပျပေးခွငျးဖွငျ့ ကံတှပွေနျမွငျ့လာပါလိမျ့မယျ။ အခဈြရေးမှာ ခဈြသူနဲ့ အနဝေေးဖို့ အကွောငျးဖနျလာလိမျ့မယျ။ ပညာရေးအတှကျတော့ စိတျအေးခမျြးရမဲ့ အခြိနျပါပဲ။
အထူးဟော - ရှေးခယျြရခကျနလေိမျ့မယျ။
ယတွာ - ကွံရညျတဈခှကျ မှေးနညေ့နခေငျးမှာ ဘုရားကပျပါ။
ကံဇာတာ အထူးမွငျ့မားနခြေိနျပါပဲ။ ကနျြးမာရေးဒေါငျဒေါငျမွညျ နပေါလိမျ့မယျ။ နမေကောငျးဖွဈနသေူမြားဒီကာလတှငျ ဆေးတိုးသှားတတျပါတယျ။နာတာရှညျရောဂါသညျမြား ဆရာကောငျးသမားကောငျး တှမေ့ညျ။ ငှကွေေးအဘကျဘကျက ဝငျလာမဲ့အခြိနျပါပဲ။ ငှအေရမျးရှငျမှာပါ။
ငှကွေေးရငျးနှီးမှု လုပျငနျးတှေ စတငျပွုလုပျဖို့ ကောငျးပါပွီ။ တဈခုသတိထားရမှာက လူမြားမြားနဲ့ အုပျစုဖှဲ့သှားလာခွငျး ညဉျ့နကျသနျးခေါငျ အပွငျထှကျခွငျးကို ဒီကာလအတှငျး လြှော့ပါ။ ပွဿနာက မဖိတျချေါဘဲရောကျလာတတျလို့ပါ။ အစုစပျအလုပျ၊ရှယျယာအလုပျတှခေဏဆိုငျးထားပါအုံး။
ခဈြရသူဆီက အဖွမေတောငျးသငျ့သေးသလို စိတျကောကျနတေဲ့ခဈြသူကိုလဲ မခြော့ပါနဲ့အုံး။ အလုပျစီးပှားကံကတော့ အထူးပွောစရာမလိုအောငျ ကောငျးနပေါတယျ။ ပညာရေးကံ ကောငျးနခြေိနျပါပဲ။
အထူးဟော = ကံအထူးကောငျးသညျ။
ယတွာ = ရဟနျးသံဃာတှကေို ဆေးလှူဒါနျးပါ။
1.1.2021 မှ 31.12021ထိ တဈလစာဟောစာတမျး
မိသားစုနဲ့အလုပျကွား ဗြာမြားရမညျ ။ အလုပျအဆငျပွနေလေို့ အလုပျထဲ စိတျနှဈမယျကွံပွီးခါမှ မိသားစု ပွဿနာတှကွေောငျ့ အလုပျပကျြအကိုငျပကျြဖွဈနရေမညျ။ လုပျငနျးတူအခငျြးခငျြး အားပွိုငျမှု တိုကျခိုကျမှုတှေ ရှိပမေဲ့ အဆုံးသတျ မိမိသာအနိုငျရမညျ။
အလုပျပငျပနျးခွငျး၊ လူမှုရေးကိစ်စတှကွေောငျ့ပငျပနျးတာတှေ စုပွီးဖြားနာတတျတဲ့အခြိနျပါ။ စီးပှားရေးခြဲ့ထှငျဖို့ စပျတူလုပျငနျးစတငျဖို့အကောငျးဆုံး ကာလပါပဲ။ ပညာရေးအခနျးကဏ်ဍကတော့ အားနညျးနပေါတယျ။ လူငယျတှစောထဲ စိတျမပါဖွဈတတျတယျ။
စာကကျြဖို့ ပငျြးနလေိမျ့မယျ။ လခစားဝနျထမျးမြား နရောကောငျးရခွငျး ၊ရာထူးတိုးခွငျးမြိုး ရှိနလေိမျ့မယျ။အခဈြရေးကံကတော့ မကောငျးနိုငျသေးပါဘူး။ ခဈြသူက မိမိအပျေါ ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့လာတတျပါတယျ။
အထူးဟော = စီးပှားရေးကောငျးမညျ။
ယတွာ = ဘုရားစိနျဖူးတျောပုံအား ဓမ်မဒါနလကျဆောငျပေး ဖွနျ့ဝပေါ။
1.1.2021မှ 31.12021 ထိ တဈလစာဟောစာတမျး
စိတျလနေတေတျတယျ။ ဆုံးဖွတျရခကျတာမြိုး ကွုံရလိမျ့မယျ။ မိဘတှအေတှကျ ပူပနျစိတျညဈ ရတတျတယျ။ လုပျငနျးစီးပှားဆုတျယုတျတတျတယျ။ အလုပျဒဏျပိနတေတျတယျ။ လူမြိုးခွား၊ ဘာသာခွား တှရေဲ့ ကူညီမစခွငျးခံရမယျ။ ခရီးကိစ်စ၊ နိုငျငံရပျခွားနဲ့ ဆကျသှယျလုပျရတဲ့အလုပျတှေ အကြိုးပေးနညျးခြိနျပါပဲ။ ကနျြးမာရေးအထူးကောငျးခြိနျပါပဲ။အခဈြရးကိစ်စ ၊ စုတျကိစ်စတှေ ရှုပျထှေးမှုတှဖွေဈနိုငျပါတယျ။ ပညာရေးကဏ်ဌ၊ သငျကွားရေးကဏ်ဌကတော့ အထူး ကောငျးမှနျနပေါတယျ။ ပုံမှနျအတိုငျးသာ လုပျဆောငျသငျ့တဲ့ အခြိနျပါ။ ရှတေို့းဆောငျရှကျစရာ ကိစ်စမြား တဈခုခုလုပျတာနဲ့ ပကျြဖို့မြားပါတယျ။
အထူးဟော = အရာရာလှဲခြျောနမေညျ
ယတွာ = ခရပေနျး မှေးနေ့၌လှူဒါနျးပါ။
လူလိမျခံရလိမျ့မယျ။ အရမျးရငျးနှီးတဲ့သူတှရေဲ့သစ်စာဖောကျခွငျးခံရမညျ။ အောကျလကျငယျသားတှကေို အရမျးအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စမြား မကျြနှာလှဲမခိုငျးသငျ့ပါ။ လူယုံဒုက်ခပေးမဲ့အခြိနျပါပဲ။ စကျ၊ကားမောငျးနှငျခွငျး၊စကျပစ်စညျးကိုငျတှယျအသုံးပွုခွငျးအထူးသတိထားပါ။ မတျောတဆ ထိခိုကျလှယျတဲ့ ကာလတဈခု မို့လိုပါပဲ။
ဘာကိစ်စမဆို အဆုံးသတျပွီးဆုံးအောငျ မလုပျနိုငျခွငျး၊ စထားပွီး တဈဝကျတပကျြဖွဈရခွငျးမြိုးကွုံရမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ အိမျပွငျအိမျဆောကျခွငျး၊လုပျငနျးသဈစတငျခွငျးမြိုး လုံးဝမလုပျပါနဲ့။ အခဈြရေးကံ အထူးညံ့နခြေိနျပါ။ ခဈြသူနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျတာနဲ့ပွဿနာတတျခွငျး၊ စကားအခွအေတငျပွောရခွငျးတှေ ကွုံရပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးက ကွိုးစာအကောငျးဆုံးကာလပါပဲ။
ကနျြးမာရေးကောငျးနပေမေဲ့ ထိမိ ခိုကျမိ ဖွဈတာမြိုးရှိနိုငျတယျ။
အထူးဟော = ထိခိုကျလှယျနသေညျ။
ယတွာ = မိမိ၏ မှေးနအေ့ပတျတိုငျး (7) ပတျတိတိ သကျသတျလှတျ စားပေးပါ။ ဘုရားမှာ ရှဆေိုငျး ကပျပေးပါ။
အဘကျဘကျက ဖေးမကူညီမှုတှကွေောငျ့ လိုခငျြသောပနျးတိုငျကို ရောကျမညျ။ လုပျငနျးစီးပှား အထူးတိုးတတျမညျ။ ဝနျထမျးဆို နရောပေးခံရခွငျး ၊နရောကောငျးရခွငျးတှေ ရှိလာပါလိမျ့မယျ။ ဒီကာလမှာပဲ အခွားသူမြားအား အကွံပေးခွငျး၊ နှုတျ၏ဆောငျမခွငျးဖွငျ့ ထိုသူတှအေဆငျပွေ ခြောမှမေဲ့ကာလပါပဲ။ မိမိသွဇာညောငျးမဲ့ အခြိနျပါ။ ကောငျးသောခရီး ဘာသာရေးနဲ့သကျဆိုငျသောခရီးတှလေဲ သှားရပါလိမျ့မယျ။
အိမျထောငျသညျဆို တစိမျး မိနျးကလေးတှေ (ယောကျြားလေးတှေ) နဲ့ ဝေးဝေးနပေါ။ စှပျစှဲခွငျးခံရမညျ။ ငယျရှယျသူမြား အသကျကွီး၊ မလှတျလပျသူတှရေဲ့ ဖွားယောငျးသှေးဆောငျခွငျး ခံရပါလိမျ့မညျ။
ငှကွေေးလာဘျလာဘတှလေဲ ဝငျလာပါလိမျ့မယျ။ မိမိဆိုငျ ဖောကျသညျအသဈတှတေိုးလာပါလိမျ့မယျ။ ကနျြးမာရေး ပညာရေး အကောငျးဆုံးကာလပါပဲ။
အထူးဟော = ပွောသမြှဖွဈမညျ။
ယတွာ = မှေးနတှေ့ငျ သဈသီး (၇) မြိုးဘုရားလှူပါ။
အကောငျးအဆိုးမြှနခြေိနျလို့ပဲ ပွောရမလား မသိတော့ပါဘူး။ ကံညံလားဆိုတော့ မညံ့ဘူး။ ကောငျးနလေားဆိုတော့လဲ ထငျသလောကျ မကောငျးပါဘူး။
အိမျထောငျဘကျရဲ့ အိမျထောငျရေးရှုပျထှေးမှုလေးတှေ စနျးပှငျ့နမှေုတှကွေောငျ့ မိမိဗြာမြားရတတျတယျ။ အလုပျစီးပှားက အတိုကျအခိုကျလေးတှရှေိပမေဲ့ တိုးတတျမဲ့သဘော ရှိတယျ။ အဆိုးဆုံးက သူမြားအကွံပေးလို့ ဘာတဈခုမှ မလုပျမိစနေဲ့။ ဒုက်ခတှလေိ့မျ့မယျ။ မိမိဆုံးဖွတျခကျြ ၊မိမိစိတျကူးနဲ့သာ အနာဂတျကို ပုံဖျောသငျ့တဲ့အခြိနျပါ။ ငှကွေေးကံ အတျောအသငျ့ကောငျးနသေလို လာဘျလဲရှငျမဲ့ အခြိနျပါ ။ မူလလမျးကွောငျးကနေ သှဖေယျပွီးမသှားသ၍ ဒီအပတျဟာ ဇာတာရှငျအတှကျ ကံမညံ့ပါဘူးဗြ။ အခဈြရေးကတော့ စိတျကောကျလိုကျ ပွနျခဈြလိုကျဖွဈနမှောပါ။
ပညာရေးကံကတော့ အကောငျးအဆိုး မြှနပေါတယျ။
အထူးဟော = ဖွေးဖွေးမှနျမှနျသာ ဆောငျရှကျပါ။
ယတွာ = ပနျးအနီရောငျ (10) ပှငျ့၊ ဖယောငျးတိုငျ (10) တိုငျ အမှေးတိုငျ (10) တိုငျ မှေးနနေံ့နကျဘုရားလှူ ပါ။
ဆရာမင်းသုခ၏ 2021 ခုနှစ် (1) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း
2021 ခုနှစ် (1) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း
1.1.2021 မှ 31.1.2021 ထိ မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်
ဟောစတမ်းအပြင် ယတြာလေးတွေပါလို့ သိမ်းထားဖို့မမေ့နဲ့နော်..
သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ဖတ်ရှု့နိုင်အောင် Like and Share ပေးကြပါ.
2021 နှစ်သစ်အတွက် မိမိကံကြမ္မာအဆိုးအကောင်းကို ဆရာမင်းသုခထံ ဖုန်းဖြင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီး လိုအင်ဆန္ဒ တစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေ.. ကံဇာတာအညံ့များလည်း ပပြောက်ပြီး ကံပွင့် စန်းပွင့် မေတ္တာရေး အချစ်ရေးများ အဆင်ပြေကြပါစေ..
1.1.2021 မှ 31.12021 ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ ဒီလအတွင်း သူများကိစ္စကြားဝင် ကူညီခြင်း၊အာမခံခြင်း တွေကြောင့်အထူးဒုက္ခရောက် တတ်ပါတယ်။ လင်မယားကြား မိတ်ဆွေတွေကြား ဘယ်သူ့ကြားမှ မဝင်မိပါစေနဲ့။ ဘယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဖြစ်ဖြစ် အခုကာလမှာ ရတာကနည်းနည်း ၊ပြဿနာရှင်းရတာက များများဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများ ကျပျောက်ခြင်း သူခိုးခိုခံရခြင်းတွေ ကြုံနိုင်တယ်။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ စီးပွားတွက် တွက်နေတဲ့ချစ်သူကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်။ ချစ်သူကိုအချိန်ပေးဖို့ထက် ငွေနောက်ပဲလိုက်နေပါလိမ့်မယ်။အလုပ်မှာ ရန်ပေါ်နိုင်တဲ့ကာလပါ။ အလုပ်ရှာနေသူများ အလုပ်ရဖို့ဝေးနေပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းရင်းနှီးသူတွေနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး သိပ်မညံ့ပေမဲ့ ပညာရေးကံကြမ္မာကတော့ အညံ့ဆုံးအနေအထားကို ရောက်နေတဲ့ ကာလပါပဲ။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက ဘယ်သူကိုမှ မယုံသင့်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ယတြာ = သင်္ဘောသီးဖျော်ရည်တစ်ခွက် မွေးနေ့နံနက်မှာ ဘုရားကပ်လှူလိုက်ပါ။
1.1.2021မှ 31.12021ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
ဆုံးဖြတ်ရ ခက်နေလိမ့်မယ်။ အရာရာသတိထား ဆောင်ရွက်ပါ။ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စများ မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်နေရပါတယ်။ မသွားချင်တဲ့နေရာ သွားရခြင်း၊ နယ်ပြောင်းခံရခြင်းတွေ ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အထက်လူကြီးက မိမိအပေါ် အမြင်မကြည်တာမျိုးတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ စိတ်အရမ်းညစ်ရတတ်တယ်။ အိမ်ထောင်ဘက် အချင်းချင်းစကားအခြေအတင် များရတတ်တယ်။ မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာရတတ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့ ကူညီမှုအများကြီးရမဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးလဲ အနည်းငယ် အားနည်းနေပါတယ်။ နေပူနည်းနည်းမိတာမျိုး၊ အိပ်ရေးပျက်တာမျိုးကြုံတာနဲ့ ဖျားနာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခရီးထွက်ခြင်း၊ ကလေးတွေကို ပျော်အောင်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကံတွေပြန်မြင့်လာပါလိမ့်မယ်။ အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အနေဝေးဖို့ အကြောင်းဖန်လာလိမ့်မယ်။ ပညာရေးအတွက်တော့ စိတ်အေးချမ်းရမဲ့ အချိန်ပါပဲ။
အထူးဟော - ရွေးချယ်ရခက်နေလိမ့်မယ်။
ယတြာ - ကြံရည်တစ်ခွက် မွေးနေ့ညနေခင်းမှာ ဘုရားကပ်ပါ။
ကံဇာတာ အထူးမြင့်မားနေချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည် နေပါလိမ့်မယ်။ နေမကောင်းဖြစ်နေသူများဒီကာလတွင် ဆေးတိုးသွားတတ်ပါတယ်။နာတာရှည်ရောဂါသည်များ ဆရာကောင်းသမားကောင်း တွေ့မည်။ ငွေကြေးအဘက်ဘက်က ဝင်လာမဲ့အချိန်ပါပဲ။ ငွေအရမ်းရွှင်မှာပါ။
ငွေကြေးရင်းနှီးမှု လုပ်ငန်းတွေ စတင်ပြုလုပ်ဖို့ ကောင်းပါပြီ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက လူများများနဲ့ အုပ်စုဖွဲ့သွားလာခြင်း ညဥ့်နက်သန်းခေါင် အပြင်ထွက်ခြင်းကို ဒီကာလအတွင်း လျှော့ပါ။ ပြဿနာက မဖိတ်ခေါ်ဘဲရောက်လာတတ်လို့ပါ။ အစုစပ်အလုပ်၊ရှယ်ယာအလုပ်တွေခဏဆိုင်းထားပါအုံး။
ချစ်ရသူဆီက အဖြေမတောင်းသင့်သေးသလို စိတ်ကောက်နေတဲ့ချစ်သူကိုလဲ မချော့ပါနဲ့အုံး။ အလုပ်စီးပွားကံကတော့ အထူးပြောစရာမလိုအောင် ကောင်းနေပါတယ်။ ပညာရေးကံ ကောင်းနေချိန်ပါပဲ။
1.1.2021 မှ 31.12021ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
မိသားစုနဲ့အလုပ်ကြား ဗျာများရမည် ။ အလုပ်အဆင်ပြေနေလို့ အလုပ်ထဲ စိတ်နှစ်မယ်ကြံပြီးခါမှ မိသားစု ပြဿနာတွေကြောင့် အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက်ဖြစ်နေရမည်။ လုပ်ငန်းတူအချင်းချင်း အားပြိုင်မှု တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိပေမဲ့ အဆုံးသတ် မိမိသာအနိုင်ရမည်။
အလုပ်ပင်ပန်းခြင်း၊ လူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်ပင်ပန်းတာတွေ စုပြီးဖျားနာတတ်တဲ့အချိန်ပါ။ စီးပွားရေးချဲ့ထွင်ဖို့ စပ်တူလုပ်ငန်းစတင်ဖို့အကောင်းဆုံး ကာလပါပဲ။ ပညာရေးအခန်းကဏ္ဍကတော့ အားနည်းနေပါတယ်။ လူငယ်တွေစာထဲ စိတ်မပါဖြစ်တတ်တယ်။
စာကျက်ဖို့ ပျင်းနေလိမ့်မယ်။ လခစားဝန်ထမ်းများ နေရာကောင်းရခြင်း ၊ရာထူးတိုးခြင်းမျိုး ရှိနေလိမ့်မယ်။အချစ်ရေးကံကတော့ မကောင်းနိုင်သေးပါဘူး။ ချစ်သူက မိမိအပေါ် ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့လာတတ်ပါတယ်။
ယတြာ = ဘုရားစိန်ဖူးတော်ပုံအား ဓမ္မဒါနလက်ဆောင်ပေး ဖြန့်ဝေပါ။
1.1.2021မှ 31.12021 ထိ တစ်လစာဟောစာတမ်း
စိတ်လေနေတတ်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ရခက်တာမျိုး ကြုံရလိမ့်မယ်။ မိဘတွေအတွက် ပူပန်စိတ်ညစ် ရတတ်တယ်။ လုပ်ငန်းစီးပွားဆုတ်ယုတ်တတ်တယ်။ အလုပ်ဒဏ်ပိနေတတ်တယ်။ လူမျိုးခြား၊ ဘာသာခြား တွေရဲ့ ကူညီမစခြင်းခံရမယ်။ ခရီးကိစ္စ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနဲ့ ဆက်သွယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေ အကျိုးပေးနည်းချိန်ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းချိန်ပါပဲ။အချစ်ရးကိစ္စ ၊ စုတ်ကိစ္စတွေ ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးကဏ္ဌ၊ သင်ကြားရေးကဏ္ဌကတော့ အထူး ကောင်းမွန်နေပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချိန်ပါ။ ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်စရာ ကိစ္စများ တစ်ခုခုလုပ်တာနဲ့ ပျက်ဖို့များပါတယ်။
အထူးဟော = အရာရာလွဲချော်နေမည်
ယတြာ = ခရေပန်း မွေးနေ့၌လှူဒါန်းပါ။
လူလိမ်ခံရလိမ့်မယ်။ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းခံရမည်။ အောက်လက်ငယ်သားတွေကို အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စများ မျက်နှာလွှဲမခိုင်းသင့်ပါ။ လူယုံဒုက္ခပေးမဲ့အချိန်ပါပဲ။ စက်၊ကားမောင်းနှင်ခြင်း၊စက်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းအထူးသတိထားပါ။ မတော်တဆ ထိခိုက်လွယ်တဲ့ ကာလတစ်ခု မို့လိုပါပဲ။
ဘာကိစ္စမဆို အဆုံးသတ်ပြီးဆုံးအောင် မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ စထားပြီး တစ်ဝက်တပျက်ဖြစ်ရခြင်းမျိုးကြုံရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ခြင်း၊လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်းမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ အချစ်ရေးကံ အထူးညံ့နေချိန်ပါ။ ချစ်သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တာနဲ့ပြဿနာတတ်ခြင်း၊ စကားအခြေအတင်ပြောရခြင်းတွေ ကြုံရပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးက ကြိုးစာအကောင်းဆုံးကာလပါပဲ။
ကျန်းမာရေးကောင်းနေပေမဲ့ ထိမိ ခိုက်မိ ဖြစ်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်။
ယတြာ = မိမိ၏ မွေးနေ့အပတ်တိုင်း (7) ပတ်တိတိ သက်သတ်လွတ် စားပေးပါ။ ဘုရားမှာ ရွှေဆိုင်း ကပ်ပေးပါ။
အဘက်ဘက်က ဖေးမကူညီမှုတွေကြောင့် လိုချင်သောပန်းတိုင်ကို ရောက်မည်။ လုပ်ငန်းစီးပွား အထူးတိုးတတ်မည်။ ဝန်ထမ်းဆို နေရာပေးခံရခြင်း ၊နေရာကောင်းရခြင်းတွေ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီကာလမှာပဲ အခြားသူများအား အကြံပေးခြင်း၊ နှုတ်၏ဆောင်မခြင်းဖြင့် ထိုသူတွေအဆင်ပြေ ချောမွေ့မဲ့ကာလပါပဲ။ မိမိသြဇာညောင်းမဲ့ အချိန်ပါ။ ကောင်းသောခရီး ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်သောခရီးတွေလဲ သွားရပါလိမ့်မယ်။
အိမ်ထောင်သည်ဆို တစိမ်း မိန်းကလေးတွေ (ယောကျာ်းလေးတွေ) နဲ့ ဝေးဝေးနေပါ။ စွပ်စွဲခြင်းခံရမည်။ ငယ်ရွယ်သူများ အသက်ကြီး၊ မလွတ်လပ်သူတွေရဲ့ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ခြင်း ခံရပါလိမ့်မည်။
ငွေကြေးလာဘ်လာဘတွေလဲ ဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ မိမိဆိုင် ဖောက်သည်အသစ်တွေတိုးလာပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေး ပညာရေး အကောင်းဆုံးကာလပါပဲ။
အထူးဟော = ပြောသမျှဖြစ်မည်။
ယတြာ = မွေးနေ့တွင် သစ်သီး (၇) မျိုးဘုရားလှူပါ။
အကောင်းအဆိုးမျှနေချိန်လို့ပဲ ပြောရမလား မသိတော့ပါဘူး။ ကံညံလားဆိုတော့ မညံ့ဘူး။ ကောင်းနေလားဆိုတော့လဲ ထင်သလောက် မကောင်းပါဘူး။
အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးရှုပ်ထွေးမှုလေးတွေ စန်းပွင့်နေမှုတွေကြောင့် မိမိဗျာများရတတ်တယ်။ အလုပ်စီးပွားက အတိုက်အခိုက်လေးတွေရှိပေမဲ့ တိုးတတ်မဲ့သဘော ရှိတယ်။ အဆိုးဆုံးက သူများအကြံပေးလို့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်မိစေနဲ့။ ဒုက္ခတွေ့လိမ့်မယ်။ မိမိဆုံးဖြတ်ချက် ၊မိမိစိတ်ကူးနဲ့သာ အနာဂတ်ကို ပုံဖော်သင့်တဲ့အချိန်ပါ။ ငွေကြေးကံ အတော်အသင့်ကောင်းနေသလို လာဘ်လဲရွှင်မဲ့ အချိန်ပါ ။ မူလလမ်းကြောင်းကနေ သွေဖယ်ပြီးမသွားသ၍ ဒီအပတ်ဟာ ဇာတာရှင်အတွက် ကံမညံ့ပါဘူးဗျ။ အချစ်ရေးကတော့ စိတ်ကောက်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ဖြစ်နေမှာပါ။
ယတြာ = ပန်းအနီရောင် (10) ပွင့်၊ ဖယောင်းတိုင် (10) တိုင် အမွှေးတိုင် (10) တိုင် မွေးနေ့နံနက်ဘုရားလှူ ပါ။